ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : အမည်သညာခေါ်စရာ
ကြာသာပတေးနေ့ တုန်းက ဆရာမ နာမည် မှည့်ခေါ်ခြင်းအကြောင်းကို ကို ဆွေးနွေးခိုင်းတယ်။
ကျမတို့ အတန်းထဲမှာ အတန်းသားတွေဟာ နိုင်ငံအနှံကမို့တစ်ယောက်စီပြောပြချက်အရ သူတို့ တွေရဲ့နာမည်မှည့်ခေါ်ခြင်းအကြောင်းတွေကို ကြားသိရပါတယ်။
အီတာလျှံနိုင်ငံသား ကတော့ သူတို့ ဆီမှာ ယောက်ျားလေးအများစု ရဲ့ နာမည်များဟာ "O "နဲ့ အဆုံးသတ်ကြတယ်တဲ့ ဥပမာ။ Marcello, Valintino, Rinaldo, တို ဖြစ်ပြီး ။ မိန်းကလေး များဆိုရင်တော့ "A" နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ နာမည်များ ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ။ Belinda, Carmela, Annata, Elena, Madonna, Gemma, စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နားက ဥရောပနိုင်ငံတချို့ နာမည်ပေးပုံတွေဟာ ဆင်ဆင်တူကြပြီး လက်တင်၊ဂရိ၊ဟီးဘရူး၊ပြင်သစ်၊စပိန် တို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဟာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မကွဲပြားပါဘူး။ ခရစ်ယာန် ဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ရောမနဲ့ ဂရိဘက်ကတော့ နတ်ဘုရားတွေ ၊ နတ်ဘုရားမတွေ နာမည်ကို မှည့်ခေါ်ကြတယ်တဲ့။ သူသာ သမီးလေးတစ်ယောက်ရရင် Asia လို့ နာမည်ပေးမယ်တဲ့ ။ geographic interest က Easten countries က ဒေသတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ အရှေ့ ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေလို ဖြစ်စေချင်လို့ တဲ့ ။ သားမွေးရင်တော့ Morgan လို့ နာမည်ပေးမယ်ဆိုဘဲ။ ပြောတဲ့ သူက ခုမှ အသက် ၁၈ သား ဘဲရှိသေးတယ်။ အင်တာဗျူးတဲ့ ကျမက အရှေ့ ပိုင်းသူဖြစ်နေလို့မျက်နှာ လိုက်ပြီးဖြေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တရုတ်တွေကျတော့ နာမည်ပေးရင် ရေးရလွယ်တဲ့ နာမည်ကိုပေးပါတယ်တဲ့ ။ ရေးရခက်ရင် ကလေးရဲ့ ဘဝ ခက်ခဲတတ်တယ်လို့ ယူဆလို့ တဲ့ ။ သူတို့ စာလုံးတွေက လဲ ဘူးသီးကြော်၊ငါးပေါင်းကြော်တွေနဲ့ တူတာကို။ ဒီစာရေးနေတုန်းမှာဘဲ Wigan မှာနေတဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း ပြည်ကြီးသူကို လှန်းပြီး ကွမ်ရင်မယ်တော်အကြောင်းမေးမိပါတယ် (Guanyin) မယ်တော် က တကယ်တော့ ၊ မိန်းမ ကိုယ်ခံန္ဓာနဲ့ ယောင်္ကျား တမန်တော် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်လို့ဂျပန်မှာရော တရုတ်မှာပါ ကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့။ ကွမ်ရင်ပုံတွေမှာ ကြာပန်း၊ ကျူပင်၊ ခရားအိုး စတာတစ်ခုခုကိုင်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ရုပ်မြင်သံကြား တွေမှာ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွေ မကြာခဏ ပြဘူးတာရော၊ သိုင်းဝတ္ထုတွေပါ အဖတ်များကြလို့ကွမ်ရင်မယ်တော်အကြောင်းက တော့ ကျမတို့ လူမျိုးအတွက် သိပ်မစိမ်းဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီနိုင်ငံက မျက်နှာဖြူတွေကတော့ နာမည်ပေးတာ ရှေးတုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ နာမည်တွေ ကိုမပေး လို တော့ ဘူးတဲ့ သူတို့ ကလေးတွေ အဖိုးကြီးနာမည်တွေနဲ့မကိုက်ဘူးတဲ့ဲဥပမာ Alfred, Joseph တို့ပေါ့ တချို့ က တော့ Celebrity နာမည်တချို့ ကိုလဲ ယူပြီးပေးတတ်ကြတယ်တဲ့ ။ ဆရာမ ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့middle name မှာ အင်္ဂလန်က ဘောလုံးအသင်းပေါင်းစုံရဲ့ နာမည်တွေ အစုံပါတယ်ဆိုဘဲ။ တချို့ စဉ်းစားရခက်တဲ့ ဂွတီးဂွကျနာမည်တွေ ကတော့Jo King, Justin Case, Mary Christmas, Hazel Nutt. ဟူး။ အဓိပ္ပါယ် တွေက တော်တော်တာသွားတယ်နော်။ သူတို့ မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ပြီးရင် နောက်က Surname ကိုပြောင်းလေ့ပြောင်းထရှိတယ်လေ။ တခါတခါ ဆရာ ဆရာမတွေက roll call ခေါ်ရင် မရီမိအောင် ပဇောင်ကိုက်ထားရတယ်ဆိုဘဲ။
ဥပမာ ။ Carrie Oakey, Bill Board, Mr and Mrs Mee,Rob'sabanker, Sue'saLawer.
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း သူတွေ ဖြစ်တဲ့အီရန်၊ အီရတ်၊ က ကျောင်းသူတွေကတော့ တမန်တော်မိုဟာမက် ရဲ့ သမီးတွေ နာမည်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ။ ဖာတေမာ၊ အူကီယာ၊ ဇေနတ် စတဲ့ရဲ့ နာမည်ပေးကြတာ များတယ်တဲ့ဘာသာရေး က နာမည်ပေးမှု ကို လွှမ်းမိုးတာပါဘဲ။ တခြားနိုင်ငံတွေလို ပါဘဲလေ။ ကျမ တို့ အတန်းထဲက ကောင်မလေးနာမည်က "အူကီယာ" Ruqayah ပါ။ ပေါင်းတာက တမျိုးအသံထွက်တာက တမျိုး သူမှာ တော်တော် ရှင်းပြရတယ်ဆိုဘဲ။ အသံထွက်မှန်အောင်လို့ 
ကျမတို့မြန်မာ နာမည်တွေ ကြတော့ ဘာသာရေး အသုံးအနှုံးတွေ များတယ်နော်။ ဥပမာ။ မာလာ၊ သီတာ၊ စန္ဒာ၊ ကလျာ၊ သူရ၊သီဟ၊ နန္ဒ၊ ကျော်သူ ၊ စည်သူ၊ ဗလ စတာတွေဟာ ပါလိ ဘာသာက ဆင်းသက်လာတာကို။ ဆရာမက ကျမကို နာမည်ပြောင်းခွင့်ရရင် ဘာနာမည်ပြောင်းချင်လဲ တဲ့မထင်မှတ်တဲ့ မေးခွန်းဘဲ။ ကျမကတော့ ပန်းပွင့်နာမည်နဲ့pen name တခုတော့ လိုချင်တယ် လို့ ပါးစပ်ထဲရှိရာပြောလိုက်မိတယ်။ Jusmin လို့ ။ စံပယ်ပန်းလေး၊ ဖြူဖြူမွှေးမွှေး တော်တော် အေး ချမ်းတဲ့ ပန်းပွင့်နာမည်ပေါ့။ ဘုရားပန်း တင်ချင်လိုက်တာ။ ဆရာမကတော့ သူလဲ ပြောင်းလို့ ရရင် ပြောင်းချင်ပေမဲ့ passport မှာရော၊ card တွေမှာပါပြောင်းရမှာမို့သူနဲ့ ကွာထားတဲ့ ယောက်ျားရဲ့Sir name နဲ့ ဘဲ တသက်လုံးနေသွားရတော့မယ်တဲ့ ။ အလုပ်ရှုပ် ပြီး ၊ ငွေကုန်ကြေးကျများလွန်းလို့ တဲ့။
အင်္ဂလိပ် naming system မှာ middle name ကြိုက်သလောက် သုံးလို့ ရပါတယ်။ Middle name ထားခြင်းအားဖြင့် လူတွေလိုက်တုခြင်း၊ idenity အတုလုပ်ခြင်းများကို တနည်းတဖုံကာကွယ်လို့ ရပါတယ်တဲ့ ။ ကိုယ်နာမည်ကို လူတွေ မခေါ်စေချင်ရင် middle name ကိုခေါ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။
ဥပမာ Adrina Rose Blessing Isabelle Kylie Smith, Miss Adrina Smith က သူ့ ရဲ့first name Adrina ကို မခေါ်စေချင်ရင် Rose လို့ နာမ်စားသုံးစေချင်ရင်လဲရတယ် Kylie လို့ သုံးစေချင်ရင်လဲ ရတယ် ကြားထဲ က Middle name တစ်ခုခု ကို ခေါ်ခိုင်းလို့ ရတာပေါ့လေ။
Anonymous 29 May 2010 at 15:47
ဒီပို့ စ်ကတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းပါဧ။်...နာမည်နဲ့ ပတ်သက်ရင်..ငါတို့ လူမျိုးတွေ...ဆေးရုံသွား..ရုံးကိတ်စသွား.....ငွေလွှဲ.ရင် လက်ခံမဲ့ သူအမည်...ပို့ သူအမည်.... first name, middle name ....ဘာညာတွေနဲ့မဖြေတတ်ရင်...တိုင်ပတ်တာ..ခဏခဏဘဲ။ ရှုပ်ပါတယ်...ခင်နုနုနယ်ဘသိန်းတို့ ....အိအိအသဲခိုင်ခိုင်မြဲတို့ ....ဇာဇာဇယ်ဇယ်ခင်နုနယ်တို့ ....ဆိုရင်..သာတောင်ရှုပ်ဦးမယ်။ စကားမစပ်...စီရုတ်မကို..မေးပြီး..အန်းကုန်းဘိုးတော်ရာဇ၀င်တူးကြည့်ပါလား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလားဘဲ။ ဖတ်ပြီး ...အမှတ်ပြည့်ပေးသွားပါဧ။်
ရိုးရိုး 29 May 2010 at 15:52
အိမ်းမေးမည်။ ငါလဲ သူများရာဇဝင် ခဏခဏမေးသည်။ သူမ ပြည်ကြီးပြန်တော့ ငါ့ကို ဘာလို ချင်လဲမေးသည်။ ငါက made in china တခုမှ မလို ချင်လို့ နောက်လိုက်သည်။
ရိုးရိုး 29 May 2010 at 15:56
ခိုင်သဇင်ကျော့မှုးကေသွယ်ထူး၊ ကြီးကြယ်ထွတ်ထား မမိဘုရား၊ စမ်းမိမိမုန်း၊ တို့ ဘာတို့ နင်မေ့နေပုံရတယ်။ အေးဟာ စာဖတ်ပြီးရင်မေ့လို့ မရဘူးနော် ရှေးခေတ်ကစာတွေ အတော်ကောင်းဒါဟ။
ဖိုးတက် 29 May 2010 at 16:12
ကွမ်ရင်မယ်တော် က ငါတို့ကြည့် ခဲ့သမျှ မျောက်ကား မှတော့ မိန်းမ ကြီး ဟေ့ တော်တော် ခန့်တဲ့မိန်းမ ကြီး။ ၀ူခုံး ရဲ့ခေါင်းက သံကွင်းကသူ စွပ်တာ။
"အူကီယာ" Ruqayah ဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့ တော်တော် ကို ခေါ်ရခက်ပါလိမ့် မယ်။ နာမည် ကို တော်တော် ရှင်းပြ ရတယ် ဆိုလို့နော်ဝေ မှာ စာသင်တာလေး ပြေးသတိ ရမိပါ၏။ ဆရာမက E ကိုသင်တာ ။ သူတို့ဆီ ကအသံထွက် ကတော့ အီးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အီး ဆို တာဖြစ်ကြောင်း ဆရာမ ရှင်းပြပုံ က လက် ၂ ဘက်ကို ငယ်ငယ် က ကြက်ဖခွတ် ရင် လုပ်သလို ထားပြီး နှုတ်ခမ်း ကြီး ထော် ပြီး အိ့ကလီ... ကီးလို့အော်ပြ ပါသတဲ့ဟီးဟီး